၁၆၄၁ မှ ၁၆၅၂ အထိအိုင်ယာလန် ၃၀၀၀၀၀ ကိုအင်္ဂလိပ် - Afrikhepri Fondation မှကျွန်အဖြစ်ရောင်းချခဲ့သည်
1641 မှ 1652 ခုနှစ်, 300 000 အိုငျးရစျအင်ျဂလိခြင်းဖြင့်ကျွန်ခံနေရာသို့ရောင်းချခဲ့သည်
Iသူတို့ကကျွန်အဖြစ်ရောက်လာတယ်။ များစွာသောလူ့ကုန်ပစ္စည်းများသည်အမေရိကရှိဗြိတိန်သင်္ဘောကြီးများပေါ်တွင်သယ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုထောင်နှင့်ချီ။ တင်ပို့ခဲ့ပြီးယောက်ျား၊ မိန်းမနှင့်အငယ်ဆုံးကလေးများပင်ပါဝင်သည်။ သူတို့သည်ပုန်ကန်သို့မဟုတ်အမိန့်ကိုမနာခံသည့်အခါအဆိုးရွားဆုံးနည်းဖြင့်အပြစ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ လုပ်သားများသည်သူတို့၏လူ့ဂုဏ်သတ္တိများကိုလက်ဖြင့်ဆွဲကာခြေထောက်နှင့်လက်များကိုပြစ်ဒဏ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည်အသက်ရှင်လျက်မီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးသူတို့၏ဖမ်းဆီးခံရသူများအားသတိပေးချက်အနေဖြင့်သူတို့၏ ဦး ခေါင်းများကိုဈေးတွင်အစုရှယ်ယာတွင်နေရာချခဲ့သည်။ ကျနော်တို့သွေးထွက်သံယိုအသေးစိတ်ကိုအပေါငျးတို့သသို့သွားရန်မလိုအပ်ပါ။ မဟုတ်လား ?
Kings II နှင့် Charles I တို့သည်အိုင်းရစ်လူမျိုးများအားကျွန်ဘဝရောက်စေရန်အစဉ်မပြတ်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ကျော်ကြားသောဗြိတိန်နိုင်ငံသားအိုလီဗာခရော့ဝဲလ်သည်အိမ်နီးချင်းကိုလူမဆန်သောဤအကျင့်ကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ခဲ့သည်။
ဂျိမ်း II သည်ကမ္ဘာသစ်သို့ကျွန်အဖြစ်အိုင်းရစ်စ်အကျဉ်းသား ၃၀,၀၀၀ ကိုကျွန်အဖြစ်ရောင်းလိုက်သောအိုင်းရစ်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးစတင် ၁၆၂၅ ကိုကြေငြာပြီးနောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားပင်လယ်ရပ်ခြားသို့စေလွှတ်ကာကာရစ်ဘီယံရှိအင်္ဂလိပ်အခြေချသူများထံရောင်းချရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ၁၆ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်အိုင်းရစ်လူမျိုးများသည်အန္တိဂွာနှင့်မွန်ဆာရတ်တို့တွင်ရောင်းချသောအဓိကကျွန်များဖြစ်ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင်မွန်ဆာရတ်တ်လူ ဦး ရေ၏ ၇၀% သည်အိုင်းရစ်ကျေးကျွန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
၁၆၄၁ မှ ၁၆၅၂ အထိအိုင်းရစ်လူမျိုး ၅၀၀,၀၀၀ ကျော်ကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ၃၀၀,၀၀၀ ကိုကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအိုင်းရစ်လူ ဦး ရေ ၁.၅ သန်းမှ ၆၀၀,၀၀၀ သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကို ဖြတ်၍ မယားများနှင့်ကလေးများယူဆောင်လာရန်ဗြိတိသျှတို့ကဗြိတိသျှတို့ကအိုင်းရစ်ဖခင်များအားမိသားစုများကိုခွဲထားခဲ့သည်။ ဒါကအကာအကွယ်မဲ့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။ ဗြိတိသျှတို့၏ဖြေရှင်းနည်းမှာလေလံဆွဲရန်ဖြစ်သည်။
၁၆၅၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းအသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အကြားအိုင်ယာလန်ကလေး ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကိုသူတို့၏မိဘများထံမှဆွဲထုတ်ပြီးကာရစ်ဘီယံ၊ ဗာဂျီးနီးယားနှင့်နယူးအင်္ဂလန်တွင်ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့သည်။ ထိုဆယ်စုနှစ်အတွင်းအိုင်းရစ်လူမျိုး (အများအားဖြင့်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်များ) ကိုဘာဘေးဒိုးစ်နှင့်ဗာဂျီးနီးယားသို့ရောင်းချခဲ့သည်။ အိုင်းရစ်အမျိုးသား ၃၀,၀၀၀ ကိုလည်းအမြင့်ဆုံးလေလံသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၆၅၆ ခုနှစ်တွင်ခရော့ဝဲလ်သည်အိုင်းရစ်လူမျိုးကလေး ၂၀၀၀ အားဂျမေကာသို့ခေါ်ဆောင်ကာအင်္ဂလိပ်အခြေချနေထိုင်သူများထံရောင်းချရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ယနေ့လူအများစုကအိုင်းရစ်ကျေးကျွန်များကိုကျွန်များဟုခေါ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သည်။ သူတို့ကအိုင်ယာလန်၏အခြေအနေကိုဖော်ပြရန်စာချုပ်ရှိသည့်ကျွန်များကဲ့သို့သောအသုံးအနှုန်းများကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော် ၁၇ ရာစုမှ ၁၈ ရာစုအထိဖြစ်ရပ်အများစုတွင်အိုင်းရစ်ကျေးကျွန်များသည်လူတို့၏တိရစ္ဆာန်များထက်ပိုများသည်။
ဥပမာ, အာဖရိကကျွန်ကုန်သွယ်မှုရုံတူညီသောကာလအတွင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာကက်သလစ်ဘာသာရေးစှနျးမအာဖရိကန်ကျွန်ခံ, ထို့နောက်ငြင်းမြဲမြံစွာတည်ခြင်းနှင့်ဝယ်ဖို့ထက်ပိုစျေးကြီးသည်ကိုမကြာခဏအိုငျးရစျကျေးကျွန်ထက် သာ. ကောင်း၏ကုသခံခဲ့ရသည်။
အာဖရိကမှကျွန် 1600 နှစ်ပေါင်း (50 ဟာအဲဒီအ) ၏အဆုံးမှာအလွန်စျေးကြီးရှိကြ၏။ အိုင်းရစ်ကျေးကျွန် (5 ဟာအဲဒီအထက်မပို) စျေးပေါခဲ့ကြသည်။ တစ်စိုက်ပျိုးကြာပွတ်ဒါမှမဟုတ်သေသတ်ခြင်းကိုအမှန်တစ်ခုအိုင်းရစ်ကျွန်ရိုက်နှက်ပါကရာဇဝတ်မှုဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်၏အသေခံတစ်ဦးဘဏ္ဍာရေးဆုတ်ယုတ်မှုခဲ့ပေမယ့်နောက်ကျောကိုပိုပြီးစျေးကြီးအာဖရိကကိုသတ်ခြင်းထက်အများကြီးစျေးသက်သာလာ၏။ အင်ျဂလိဆရာများမကြာမီသူတို့ရဲ့အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ဖို့ကသူတို့ပျော်မွေ့န်ထမ်းများအတွက်အဖြစ်အများအပြားအိုငျးရစျအမြိုးသမီးမြားနှငျ့အသားကိုမွေးလာတယ်။ ကျေးကျွန်၏အမြိုးသားအကျွန်သခင်၏မရတဲ့အလုပ်သမားကျယ်ဝန်းသည့်ကျွန်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခဲ့ကြသည်။ အိုင်းရစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအခြို့သောလမ်းအတွက်အခမဲ့ဖြစ်လာသော်လည်းသူမ၏ကလေးများသည်မိမိသခင်၏ကျွန်များကိုနျြရစျ။ ရလဒ်အနေနဲ့ကဒီအသစ်ဝယ်ယူလွတ်မြောက်ခြင်းနေသော်လည်းအိုငျးရစျမိခင်များ, ခဲသူတို့သားသမီးစွန့်ပစ်နှင့်ကျွန်ခံရ၏ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအင်္ဂလိပ်များကဤအမျိုးသမီးများ (များသောအားဖြင့်တဆယ်နှစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်များ) ကိုသူတို့၏စျေးကွက်ဝေစုတိုးမြှင့်ရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်စဉ်းစားခဲ့ကြသည် - အခြေချနေထိုင်သူများသည်အိုင်ယာလန်အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များကိုမွေးဖွားလာကြသည်။ ကွဲပြားအသားအရေ။ ဤ "mulatto" ကျေးကျွန်အသစ်များသည်အိုင်းရစ်ရှ်တိရစ္ဆာန်များထက်စျေးနှုန်းပိုမိုများပြားလာပြီးထိုနည်းတူစွာအခြေချနေထိုင်သူများကိုအာဖရိကကျေးကျွန်အသစ်များ ၀ ယ်မည့်အစားငွေစုဆောင်းနိုင်သည်။ ဒီအိုင်ယာလန်အမျိုးသမီးတွေနဲ့အာဖရိကန်အမျိုးသားတွေကိုကူးပြောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၆၈၁ ခုနှစ်မှာဥပဒေပြso္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ ရောင်းရန်ကျေးကျွန်ထုတ်လုပ်ရန်အာဖရိကမှကျွန်အတွက်ယောက်ျားနှင့်အတူကျေးကျွန်အိုငျးရစျအမြိုးသမီးမြား၏မျိုးပွားတားမြစ် "။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, အဲဒါကိုကြီးမားတဲ့ကျွန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ၏အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူဝငျရောကျစှကျသာရှိသောကြောင့်ရပ်တန့်ခဲ့သည်။
ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်ကျော်အတွင်းအင်္ဂလန်သည်သောင်းနှင့်ချီသောအိုင်းရစ်ကျေးကျွန်များကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၇၉၈ ခုနှစ်အိုငျးရစျပုနျကနျမှုအပွီးထောင်သောင်းချီသောအိုင်းရစ်ကျွန်များကိုအမေရိကနှင့်သြစတြေးလျသို့ရောင်းချခဲ့သည်ဟုသမိုင်းမှတ်တမ်းများကဖော်ပြသည်။ အာဖရိကနှင့်အိုင်ယာလန်သုံ့ပန်းများကိုရက်စက်စွာနှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုများရှိခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှသင်္ဘောတစ်စင်းသည်ကျွန် ၁၃၀၂ ယောက်ကိုပင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲသို့ပစ်ချလိုက်ပြီးသင်္ဘောသားများကိုအစားအစာနှင့်အတူသိုထားနိုင်သည်။
၁၇ ရာစုတွင်အိုင်ယာလန်သည်ကျွန်ပြုခြင်း၏ကြောက်မက်ဖွယ်ရာများခံစားခဲ့ရသည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ သင်ကာရစ်ဘီယံသို့သွားသည့်အခါသင်သတိထားမိသောမျက်နှာမည်းသောမျက်နှာများသည်အာဖရိကနှင့်အိုင်းရစ်လူမျိုးများရောနှောခြင်းဖြစ်ကြောင်းသံသယအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ၁၈၃၉ ခုနှစ်တွင်ဂရိတ်ဗြိတိန်သည်စာတန်၏မျိုးနွယ်စုကိုငရဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်ကျွန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကဟက်ကာများကိုသူတို့မြင်သည့်အတိုင်းမလုပ်နိုင်သော်လည်းဥပဒေအသစ်ကဖြည်းဖြည်းချင်းအဆုံးသတ်သွားသည် ce အိုငျးရစျဒုက္ခ၏ဆိုးမျြးအခနျးကွီး။
ဒါပေမဲ့အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူမည်သူမဆိုလျှင်, ကျွန်အဖြစ်ကအားလုံးကိုထို့နောက်မှားယွင်းတဲ့သာတစ်ဦးအာဖရိကအတှေ့အကွုံခဲ့ထင်ပါတယ်။ အိုငျးရစျကိုကျွန်ခံနေရာကကြှနျုပျတို့၏စိတျထဲကနေဖျက်ပစ်ပါဘူး, အောက်မေ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့အများပိုင် (နှင့်ပုဂ္ဂလိက) ကျောင်းတွေဘယ်မှာလဲ။ သမိုင်းစာအုပ်တွေဘယ်မှာလဲ။ ဤအရာကိုအဘယ်ကြောင့်ဤမျှခဲယဉ်းစွာဆွေးနွေးသနည်း။ ရာနှင့်ချီသောအိုင်ယာလန်သားကောင်များ၏မှတ်ဉာဏ်သည်အမည်မသိစာရေးသူတစ် ဦး ၏ဖော်ပြချက်ထက်မပိုထိုက်ပေလော။
ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကအင်္ဂလိပ်ပင်လယ်ဓားပြတွေလိုချင်တဲ့အရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် histoire (မတူဘဲ ရွတ်ဆို ကတည်ရှိတစ်ခါမျှလျှင်အဖြစ်အာဖရိက) အိုင်းရစ်လုံးဝမေ့လျော့။
အိုင်းရစ်ရှ်ဒုက္ခသည်တစ် ဦး တစ်ယောက်သည်သူတို့၏အခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြရန်သူတို့၏ဇာတိမြေသို့ပြန်သွားနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုသူတို့သည်ပျောက်သောကျွန်များဖြစ်ကြသည်။ အချိန်နှင့်ဘက်လိုက်သောသမိုင်းစာအုပ်များသည်အဆင်ပြေစွာမေ့သွားတတ်သူများဖြစ်သည်။
SOURCE မှ: http://www.egaliteetreconciliation.fr/Les-esclaves-oublies-de-l-histoire-la-traite-des-Irlandais-26263.html
Ki-NDOKI - ကွန်ဂိုရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမြောက်မြားစွာရှိသောမြင့်မြတ်သောသိပ္ပံပညာ
အကန့်အသတ်မရှိစွမ်းအား - အန်တိုနီရော်ဘင် (အသံ)
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Bood စိန် (2006)